Inicio/Hacking/Sidee HACKDHAGEYSO akoon Twitter [XAL AH]
Sida shabakadaha kale ee bulshada sida Instagram iyo Facebook, halkan ka baro hababka loo adeegsado hackdhegta Twitter
0 8.334 4 daqiiqo akhri
Haddii aad ku soo gashay fikradda barashada Hackdhegta Twitter, waxaad joogtaa meesha saxda ah. Sii wad akhriska.
Dhawaan shabakada bulshada Twitter ayaa ku lug lahaa kiisas badan oo ka mid ah Hackeo xisaabaadka isticmaaleyaasheeda, oo ay ka mid yihiin isla shabakad twitter ah, leh hackweyn eo xisaabaadka dadka caanka ah, sida Gates, Obama, sidoo kale Kim Kardashian iyo Elon Musk, oo ay weheliyaan sanamyo badan oo kale oo nooc walba leh hackeados ku jira hackeo weyn.
Hagaag waan ognahay sida ay u fududahay Hackkasbashada xisaab Twitter ah ama shabakad kasta oo bulsheed, waxaan kuu sharxi doonaa sida loo sameeyo, marka lagu daro taasi waxay ku siin kartaa talooyin aad uga fogaato inaad ahaato dhibbane hacker labadaba on Twitter iyo shabakad kale oo bulsheed.
Hababka soo socda ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa Hackdheg Facebook, Hackdhagta Instagram ama xitaa loogu talagalay Hackdhegta Gmail, hotmail, aragti ama madal kasta oo kale.
Ugu horreyntii, sida aan had iyo jeer yeelno, waa in la ogaadaa in noocyada ficilladani aysan sharci ahayn ama sharci ahayn, sidaa darteed marka aad ku dhaqmeyso dhaqan-gelintiisa, waa inaad si buuxda uga feejignaataa cawaaqibka ay taasi keeneyso, sida ganaaxyada, ama xitaa ka-qaadista xorriyadda.
Ogaanshaha kor ku xusan, hababka soo socda ee aan kuugu sharxi doonno Hackdhegta Twitter, waxaan kaliya ku bixinnaa iyada oo la adeegsanayo tacliimeed iyo in la muujiyo xaddiga amni-darrada ku sii socota hareeraha internetka, sida ku xusan qodobka hackdhegta Tik Tok.
Haddaba, aan u dhaadhacno ganacsiga:
Sidee ayuu u noqon karaa Hackdhegta Twitter?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu awoodo Hackdhagayso isticmaale, oo halkan ayaynu kuu keenaynaa.
1.- Hackdhegta Twitter adoo adeegsanaya Xploitz / Phishing.
Habkan ah Hacking waxaa lagu fuliyaa adigoo iska dhigaya shirkad; waan isticmaali doonaa Twitter.
Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo degello internet ah oo u heellan waxqabadka noocan ah, phishing waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo kiiskan, Soo-galitaanka Twitter; Marka isticmaaluhu galiyo xogtooda Been-gal been ah, kuwan waxaa si toos ah loogu keydiyaa keydka koontada Hacker. Adoo adeegsanaya qaabkan iyo aaladaha si aad uga faa'iideysato, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad e-mayl u dirto dhibbanahaaga suurtagalka ah oo ay ku jiraan iskuxiraha la bixiyay, una sabir illaa ay ka galayaan xogtooda marin u helka. Hadaad iskudareyso Injineernimada bulshada, natiijadu waa guuleysatey 99%.
Hackdhegta Twitter leh Xploitz
Farshaxanka Injineeriyada Bulshada, waa farshaxanka la isku dayayo in macluumaad sax ah laga helo adeegsadayaasha iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka nafsiga ah ama khiyaanada. Farshaxankan ayaa ku baraya hel dhibco cadaadis awooddee hackbartaan habka fikirkooda iyo ugu dambaynta helitaanka aqoonsigooda. Marka hore waa inaad xog ka haysaa dhibanahaaga, oo aad daraasad ku samaysay, tani waxay kaa caawin doontaa inaad lashaqeyso emaylka. Halkan waxaad ka heli doontaa wax walba oo ku saabsan Injineernimada bulshada Hacking
2.- Hackdhegta Twitter leh "Ilowday lambarkaaga sirta ah".
Qaabkan waxaad u baahan doontaa inaad haysato aaladda gacanta ama kombiyuutarka dhibbanahaaga, maxaa yeelay markaad weydiisato inaad dib u dejiso lambarka sirta ah, waxaad codsan kartaa xiriiriye si aad u gasho. Tani waa habka ugu badan ee loo isticmaalo Hackdheg u dhig lamaanahaaga si fudud, qoys iyo saaxiibbo dhow, maadaama aad marin u heli karto mid ka mid ah aaladooda, ha noqoto moobilkooda ama kombiyuutarkooda. Maqaalka soo socda ayaa loogu talagalay Instagram, laakiin Twitter, waa isku mid.
Hackdheg la password soo kabsaday
AAN KU SOCONO, WELI AAN KA WAAYNAYO QAABAB KALE OO QURUX BADAN OO KUU CAAWIN KARA WAXA AAD RABTO!
3.- Hackdhegta twitter oo leh ereyo sir ah.
Uma baahnid inaad khabiir ku ahaato berrinka, maadaama qaabkan aad sidoo kale ku noqon karto Hackdheg u dhig bogga Twitter; waxaan ku xusuusinayaa in ficiladani gebi ahaanba yihiin sharci-darro, oo aad ku kacayso halista naftaada.
Sidaan horeyba u ognahay, xilligan daalacashada ugu isticmaalka badan waxay keydisaa furayaasheena sirta ah sidaa darteed uma baahnid inaan dib uqorno mar kale markaan rabno inaan galno shabakadeena, tani waxay faa iido u leedahay markaan rabno Hackkasbashada xisaab Twitter ah.
Caadi ahaan, daalacashada ayaa na siiya ikhtiyaarkan, oo ku kaydi xogtaada marin-u-helka haddii aad hore ugu oggolaatay inay sidaas sameeyaan. Haddii isticmaaluhu ka mid yahay kuwa isku password ku leh akoonnada kala duwan ee uu leeyahay; helitaanka mid, waxaan awoodi karnaa inaan marino kuwa kale.
Hackdhegta twitter leh furayaasha sirta ah
4.- Iyada oo loo marayo barnaamijyada basaasnimada, ama xakameynta waalidka.
Mabda 'ahaan, barnaamijyadan loogu talagalay kiniinnada iyo taleefannada gacanta waxaa loo sameeyay xakameynta waalidka ama ka-hortagga xatooyada, si kastaba ha noqotee waxaa loo isticmaali karaa in lagu duubo nambarka kumbuyuutarka, sidaa darteedna waxtar ayey noo leeyihiin. Hackdhegta Twitter. Marka waxaan macluumaad ka heli doonnaa barnaamijka ay ka furteen aaladda, oo ay ku jiraan aragtida wicitaanada socda iyo kuwa imanaya, iyo waxyaabo kale. Isla markiiba macluumaadkan waa la keydiyaa oo la xareeyaa si aad u arki karto markasta oo aad rabto.
Hackdhegta Twitter la app basaas
UGU DANBAYN LAAKIIN Ugu YAR:
5.- Hackdhegta Twitter la Keyloggers.
Kahor intaanan kuu sharaxin, waa maxay keylogger?
Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa waxa loogu yeero jajab Hackgala; Waxay ka kooban tahay barnaamijyo basaasa oo gebi ahaanba ku kaydiya wax kasta oo dhibbanaha suurtagalka ah uu ka soo qoro kumbuyuutarka, ama aaladda moobaylka.
Adeegsiga keylogger-ku aad buu khatar u yahay, waana inaad ka taxaddartaa halkaad ka qabanaysid, maxaa yeelay waxay duubi doontaa labada marin ee shabakadaha bulshada, emaylka, iyo xogta aqoonsiga baananka internetka, taas oo horseedi karta dambi. Ujeedada ugu weyn ee boostadan ayaa ah kaliya isticmaalka tacliinta, iyo dadka isticmaala inay aqoon u leeyihiin maadada.
Waa muhiim in la ogaado sida ay u shaqeyso iyo sida ay qalabkan nooga hortagi karaan, sidaa darteed waxaan heli karnaa hab aan ku xafidno xogteenna iyo aqoonsigeenna oo ammaan ah. Tani waxay kaa caawin doontaa marka lamaanahaaga, xubin qoyskaaga ah ama saaxiibkaa uu doonayo Hackdhegayso xisaabtaada Twitter.
Sida loo diyaariyo Keylogger
Hab kale oo loo adeegsaday:
Faragelinta "xoog caayaan"; kaasoo ka kooban adeegsiga barnaamij ilbidhiqsiyo gudahood ku abuuraya furayaal kala duwan oo aad isku dayi karto Hackdheg u dhig bogga Twitter. Laakiin habkani ma aha mid aad waxtar u leh, maadaama labadaba Twitter Sida shabakadaha kale, waxay uga fogaadaan sidan nidaam fudud oo wax ku ool ah; in ka badan seddex sirta qaldan, si toos ah ayuu u xiraa koontada. Sidoo kale waa laga ilaaliyaa isticmaalka Captchas, waana taas sababta habkani u yahay mid duugoobay.
Gunno! Sidee loo ilaaliyaa xogtaada iyo shahaadooyinkaaga?
In kasta oo aanu jirin hab 100% ka ammaan badan weerarada ka imanaya HackW oodnaHalkan waxaa ku yaal tilmaamo dhowr ah oo adiga lagu ilaalinayo.
Kala beddel eraygaaga sirta ah 'far waaweyn, ka yar, lambarrada, iyo astaamaha gaarka ah.
Marmar badal lambarkaaga sirta ah si looga fogaado inaad ahaato dhibbane Hackgelitaanka, ugu yaraan hal mar sanadkii.
Hubi goobaha amniga emaylka ee shabakadahaaga bulshada.
U isticmaal furaha ereyada sirta ah akoon kasta oo aad leedahay
Iska ilaali inaad ku qorto eraygaaga sirta ah kombiyuutarada aadan lahayn.
U diid in aad keydiso ereyada sirta ah ee daalacashadaada iyo abka-saddexaad.
basaas app twitter hackdhegta sirta ah twitter hackdhagayso twitter-ka wehelkayga hackdhegta xisaabteyda twitter-ka hackdhegayso xisaabtaada twitter hackdhegta twitter hackdheg twitter leh keylogger hackdhegta twitter fudud hackdheg twitter saaxiibtiis hackdheg twitter saaxiib hackdheg twitter lamaane hackdhagta twitter maya doorashooyin hackdhegeyso astaanta twitter-ka hackdhagayso xisaab twitter ah hackdhegta isticmaale twitter twitter hackdhegta
Sida loo habeeyo astaanta Instagram-ka mobilkaaga?
Sidee loo rakibaa shey WordPress ah? [Sawirro leh]